တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: လောကန္တရိတ်နှင့် ကျိတ်ပေါင်းချိန်
ဘိလပ်မြေက လောကန္တရိတ်ငရဲ ရဲ့ 
စာလာဖတ်သွားပါတယ် မမမေဓာဝီ။ ပို့စ် အသစ်တွေ ဖတ်ရတော့မယ် ဆိုတော့ ကောင်းပါတယ်။ မမ အရေးအသားက ခပ်သွက်သွက်နဲ့ ပြေပြစ်တယ်။ စကားမစပ်လေ မမ ဘလော့ဂ် လင်ခ့်ကို ရို့စ် ဘလော့ဂ်မှာ ချိတ်ထားတယ်။ ခွင့်တောင်းခဲ့တာ မသေချာလို့ ထပ်ပြောတာပါရှင့်။
12/15/2010 11:51 PM
ဘွ ဘွ ဘွး) ဂလိုပဲဗျ ဘ မှ ၀ မှာ မ ဘရင်တော့ ၀ မှာမဟုတ်ပါဘူး ။ စာမေးပွဲ ဖြေနိုင်တယ်ဆိုလို့ ၀မ်းသာပါတယ်ဗျာ ကျနော်ဆို စာမေးပွဲဖြေခါနီး ခေါင်းကို မလှုပ်ဘူး ရေချိုးလည်း အဲ့တိုင်းပဲ ထမင်းစားလည်း အဲ့တိုင်းပဲ သူငယ်ချင်းတွေက ဘာဖြစ်တာလဲ အုံးလွဲတာလားလို့မေးရင် ဟင်အင်း ငါကျက်ထားတာတွေ ပျောက်ကုန်မှာစိုးလို့ လို့ဖြေလိုက်တယ် အဲ့လောက်ထိ ကြောင်တာဗျး)
12/16/2010 2:15 AM
မနှစ်က ချော်လဲတာ အမှတ်ယသွားပြီ။
နန္ဒာ့အတွက်တော့ မမေဓါဝီ စာတွေ ဖတ်ရတာ တကယ် ဗဟုသုတရသလို အသိအမြင်လဲ လင်းစေ၊ ပွင့်စေတယ်။
အခုလို မသိတာတွေ သိရလို့ အထူး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
12/16/2010 4:53 AM
ဖတ်လို့ကောင်းသလို အကြောင်းအရာက ဗဟုသုတရစရာလေးပါလား မမေ..
အဲဒီငရဲအေးအေးကြီးကို မကြုံဖူးတော့လည်း အေးမှန်းသိသိကြီးနဲ့ ရောက်ဖူးချင်သားနော်..
ဘယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ် ကံကောင်းလို့ ရောက်ရတာဘဲမမေရယ်
တစ်ချို့များ ဒီငရဲကိုရောက်ချင်လွန်းလို့တောင် မရောက်ရ..
ဘလော့လောကကြီးထဲ ပြန်လည်ခြေချတော့မယ်ဆိုတော့ ၀မ်းမြောက်စွာကြိုဆိုပါကြောင်းးးးးးးး
သယ် ဒီကလေးနှယ်၊ စပ်စပ်စုစု၊ ငရဲတွေ ဒီလောက်ပေါတာ၊ လောကန္တရိတ်မှ သွားရှာရတယ်လို့။ သိချင်လား အသေးစိပ်။ ကြိုဆိုလျှက်ပါ။ လောလောဆယ်တော့ ဖလူးဝင်နေတယ်နော်။ နှာရည်ယိုရွဲ နတ်တော်ထဲ ရောက်နေတယ်ဗျာ့။
ဘယ်မှ မသွားရတဲ့အတူတူ ပိုစ်တွေများများရေးပေါ့နော့..။
12/16/2010 1:06 PM
သတိထားရမှာလေးတွေပြောပြတဲ့ အတွက် တန်ဘိုးရှိပါတယ်၊ ရှာလေ့ရှိလို့ပါ၊ ကျေးဇူးပါ။
မြို့မိမြို့ဖများ ပို့သတဲ့ မေတ္တာကြောင့် ဒီတခါ စာမေးပွဲကို ကောင်းကောင်းဖြေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
သတင်းကောင်းကြားရတဲ့ အတွက် ဝမ်းသာပိတိ ဖြစ်မိပါကြောင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
12/16/2010 2:17 PM
လောကန္တရိတ်ကို အကျောမခံအံကြိတ်လိုက်ပါ။ ကျိတ်ပေါင်းချိန်မှာ စိတ်ထောင်းမနေပါနဲ့။ အိပ်ကောင်းခြင်းနဲ့အိပ်ပြီးနားလိုက်ပါဦး။ :D
12/16/2010 4:10 PM
ပါဠိဝေါဟာရလေးတွေ ချစ်စရာဗျ။ ဒီစကားကို ရှင်းပြတဲ့
အဋ္ဌကထာဆရာကလဲ လောကန္တရိက်ကို နှင်းတွေဖုံးနေတဲ့ ဟိမ၀န္တာက နေရာမျိုးနဲ့ ဥပမာပေးထားသဗျာ။
ပညာရှင်များ သဘောထားချင်း အတော် နှီးနှောသကိုး။
12/16/2010 6:06 PM
It's not only in U.K. It's same here in U.S. "a aye nga ye`" isaperfect way to describe these countries I think, at least for me. I also felt exactly same as you and think many times why am I here.
The funny thing is you are in U.K and you have relatives here in U.S. I am here and I have two uncles, cousins and very best friend in England. I am dying to go there but I can't.
By the way, which city you are in Midlands. My relatives are in Birmingham. May be one day if I can ever come to visit U.K I will let you know. It will be very nice to meet you in person.
12/17/2010 1:25 AM
ဘွ ဘွ ဘွ ဒီလို အရွယ် ဒီလိုအမြဲ လောကန္တရိတ် ငရဲ.. ရပ်ပြစ်ရှစ်ပါးထဲရော ရောက်နေတာလားလို့ ပြန်စစ်ကြည့်ဦးအစ်မရေ... အော် ဘိလပ် ဘိလပ်..
ဒီငရဲခုမှကြားဖူးတယ်။ ရှိပြီးသားငရဲနဲ့တင် ကြောက်လှပြီ။ စကြာဝဠာအပြင်မှာဆိုတော့ avatarထဲက လူဆိုးတွေပဲ အဲဒီငရဲ ကျမယ်နဲ့တူတယ်။
12/17/2010 6:32 PM
အာဖရိကအငတ်ဘေးကိုလဲ ငရဲလို့ ယူဆရင် ဘိလပ်ကလဲ ငရဲဖြစ်နိုင်တာပေါ့။ ဟုတ်ဘူးလား။
နာလွန်းလို့ ညီး။ ။
ဟီး ဟီး ဟီး။ ။
12/19/2010 12:01 AM
12/19/2010 6:26 PM